UKUMAHA BARAFKA AYAA FAA'IIDO LEH: FAA'IIDOOYINKA IYO IWM - UKUNTA UKUNTA
Ugu Weyn Ee Ukunta ukunta
Ukunta ukunta: waa maxay sharafta iyo waxyeellada?
Inkasta oo ukumo boodheedu ay caan ku tahay caanaha, waxay muddo dheer ku guuleysteen saamigooda suuqa.
Rugaha dukaanka, boggaga majaladaha caanka ah iyo internetka, waxaynu ka heli karnaa macluumaad badan oo xaqiijinaya faa'iidadooda, baahida loo qabo in lagu daro cuntada maalinlaha ah si loo ilaaliyo hawlaha jidhka oo wanaagsan.
Laakiin weli, oo ay wehliyaan tiro badan oo faa'iido leh oo bogsiinaya guryaha, saynisyahanno badan ayaa ka helay digaagdaha ukunta iyo dhibaatooyinkooda, waxay xitaa tixgeliyaan halista jidhka bini'aadamka. Si aan u shaqeyno, waxaan si faahfaahsan u baran doonaa mid kasta oo ka mid ah jagooyinkaan, waxaanan muujineynaa faa'iidooyinka iyo faa'iido la'aanta ah ee cunista ukunta boodhadhka.
Faahfaahin ku saabsan faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kale ee ukunta digaaga
Maxay tahay sababta ukumaha bakeeriga ah ee ay uqoraanayaan dhinacyada oo dhan?
Tan koowaad, sababta ay tani u ahayd qadar badan oo fiitamiin ah iyo mareellooyin yar yar oo ah xiniinyaha yar ayaa abaalmarin kara jidhka bini'aadamka.
Marka labaad, badeecadan waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay kaloori aad u hooseeya, oo isla markiiba laaluushay dhamaan cuntooyinka cunta qaadka ah iyo raadraacayaasha hab nololeed caafimaad leh. Sifooyinkan, ukunta digaaga ayaa aad u liita, waxayna doorbidi karaan oo keliya sababtoo ah raqitaankooda.
Waa maxay Maaddooyinka waxtarka leh Miyey qayb ka yihiin ukunta digaaga ee digaaga?
Marka la barbardhigo fitamiin iyo macdanta macdanta, ukunta quailka waxaa lagu magacaabi karaa Klondike dhab ah:
Waxay ku jiraan fitamiin A, B1, B2, iyo sidoo kale PP. Mid ka mid ah ukunta yaryar, digaaga ayaa ku jira 2 jeer ka badan ukunta digaaga ee weyn.
Maaddooyinka macdanta ee xitaa waxay xitaa 5 jeer ka badan yihiin ukunta digaaga caadiga ah. Gaar ahaan, ukunta digaaga ayaa ku jira birta, kalsiyum, potassium iyo fosfooraska.
Astaamaha Aasaasiga ah ee sida glycine, lysine, tyrosin iyo threonin. Gaar ahaan, waxaa ugu macquulsan sababtoo ah terosin in ukumaha digaagduurku ku helay sumcadda noocyada qurxinta, maxaa yeelay qaybtan ayaa ka kooban muruqyada maqaarka, taas oo keenaysa muuqaal ka mid ah midabka maqaarka bini-aadamka caafimaad leh.
Ukunta ukunta waa la daweynayaa: Maxay yihiin dhab ahaan awood u leeyihiin inay caawiyaan jidhka bini'aadamka?
Cunsurka muhiimka ah ee jidhka bini'aadanku waa awoodda aan loo helin nafaqo yaryar, laakiin sidoo kale cunto caafimaad leh. Halkan ukunta digaaga ayaa loo saari karaa kooxdaas.
Mid ka mid ah tayada ugu horeysa ee loo baahan yahay in la fiiriyo waa awoodda lagu saameeyo hoos u dhaca tirada xaddiga jirka ee jirkaaga. Haddii aad ku barbar dhigto digaag, kan danbe, si ka duwan, wuxuu gacan ka geysan karaa dhismaha.
Cilmi-baaris khaas ah oo cilmi-baaristu samaysay ayaa muujiyay in qiimaha badeecadda la sharaxay ay sidoo kale ku jirto awoodda si wax ku ool ah u saameyn karto shaqada habdhiska dareenka. Sidaa awgeed, ku darista ukunta boodhadhka cuntada ayaa lagu talinayaa dadka qaba dhibaatooyinka niyadjabka, ama, liddi ku ah, dareen-ba'an.
Xaqiiqdu waxay tahay in qaybaha ka mid ah ka kooban qaybaha digaagduurtu ay ku dheehan tahay maaha oo kaliya "nerves", laakiin waxay dejiyaan labada habdhaqameedka iyo xakamaynta, waxay awood u siineysaa qofka inuu si deg deg ah uga guuro hal gobol ilaa mid kale.
Iron, potassium iyo fosfooraska, kuwaas oo qayb ka ah sheygan, waa waxyaabo aan muhiim ahayn oo lagu dhisayo xiriirka ka dhexeeya unugyada dareemayaasha maskaxda, taas oo ah, xusuusta aadanaha.
Marka la eego arrintan, sida wakiil ka-hortag ah oo ka yimaada ukunta digaagdoonka lagula taliyay dadka waayeelka ah, iyo horumarinta maskaxda iyo hababka kale ee la xiriira xasuusinta - carruurta yaryar.
Door muhiim ah ayaa lagu ciyaaraa ukumaha qayaxan ee ku shaqeynaya nidaamka dheef-shiidka iyo dhaqdhaqaaqa wadnaha.
Marka hore, isticmaalka badeecadani waxay cadaadisaa cadaadiska, iyo marka labaad, waxay awoodaan inay jidhka u dhaqmaan sida wakiilka antibakteriyaal, iyo wakiil immunomodulatory ah. Sidaa darteed, ukunta digaagga ayaa lagu talinayaa dadka jiran iyo jirkoodu daciif yahay kadib jirro.
Waxay si gaar ah waxtar u yeelan doonaan dadka soo socda ee qaba cudurrada noocaas ah:
Madax xanuunka joogtada ah ee soo noqnoqda.
Gastritis, iyo dhibaatooyin kale oo ku dhaca mareenka caloosha iyo mindhicirka.
Qaar ka mid ah ilaha xogta waxay bixiyaan macluumaad sheegaya digaagga digaagduurku xitaa yeelan karaan saameyn togan oo ku saabsan habka loo nadiifiyo beerka iyo kelyaha, iyo ka caawinta sonkorowga.
Waxaa lagu talinayaa dadka ku nool agagaarka warshadaha waaweyn oo qashinka culus ku tuura hawada. Xaqiiqdu waxay tahay in ukunta digaagdarrada xitaa xitaa caawinta radionuclides culus oo jirka ka yimaada.
Runtu waa xaqiiqda ah cunista ayaa lagu taliyaa xitaa qolka ukunta digaaga.
Xaqiiqdu waxay tahay in 90% ka mid ah ay ka kooban tahay waa macdan cad oo calcium. Isla mar ahaantaana, way sahlan tahay oo dhakhso badan u tahay dheefshiidka, xitaa daawooyinka gaarka ah ee laga iibsan karo farmasiyada.
Sidoo kale, ka sokow kaalshiyam, ukumaha qani ku ah qaniimada silicon, copper, sulfur, fluorine iyo zinc xitaa. Si loo magdhabo la'aanta kalsiyum, waxaa loo isticmaalaa qaab la jajabiyey, waxaana lagu taliyaa xitaa carruurta, haweenka uurka leh iyo haweenka qaba menopause.
Waxyaabaha noocan oo kale ah, kuwaas oo badan oo tixgeliya inay noqdaan qashin, ayaa aad uga muuqata quruxda timaha iyo ciddiyaha, xoogga lafta. Waxaa la aaminsan yahay in xilliga uurka uu isticmaalka ukumaha oo dhan uu jilicsan yahay muujinta sunta sunta.
Cunista ukumaha cidhiidhiga ah ee cayriin: ma la oggol yahay?
Fikradda ah in ukumaha la cuno waa la cunaa qashinka waxaa lagu taageeraa bayaankan soo socda: iyadoon daaweyn kuleyl ah, ku dhawaad ​​dhammaan alaabooyinka waxa ku jira nafaqooyin aad u badan. Sidaa darteed, guud ahaan, tan ayaa lagula talin karaa.
Laakiin weli, waxaa jira khatar gaar ah, oo ah salmonellosis.
Haddii ukunku ku dhaco cudurkan, waxay sidoo kale saameyn kartaa jidhka aadanaha, taas oo ah mid aan loo baahnayn.
Sidaa darteed, waxaa habboon in la cuno ukunta ceyriinka oo kaliya, laga helo wax soosaarkeena, taniyo soosaarka warshadaha ma fududa in la ilaaliyo waxyaabahan oo kale, ma aha in dhammaan soo saarayaasha ay yihiin kuwo si taxadar leh leh.
Ukunta ukunta - waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntada dadka
Dabcan, qof walbana ma raacayo qaanuunkan, sababtoo ah cid kastoo ogyahay waxa suurtagal ah ee sheygan. Si kastaba ha noqotee, dad badan kama baqanayaan in ay u yeeraan digaagduur lo'aad oo ah awood dhab ah iyo dhalinyaro, gaar ahaan hab daaweyneed oo ragga ah.
Ilaha sayniska ee caanka ah xittaa marqaati u ah cilmi-baaris oo u oggolaanaya ukumaha barafka ah in la dhigo barta Viagra, iyo xitaa ka sareeya. Dabcan, in 100% ay saameyn u yeelato daroogada ayaa la filan karaa, hase yeeshee waxaa suurtogal ah in la sii wado oo la kordhiyo awoodda sanadaha badan.
Xaqiiqdu waxay tahay in qaybaha ukunta boodhadhku ay si wanaagsan ugu jawaabaan shaqooyinka taranka ee ragga.
Caafimaadka haweenka iyo ukunta quail
Inta lagu jiro uurka, jirka dumarka ah ayaa aad u ba'an, maadaama baahida loo qabo fiitamiinada iyo maadooyinka waxtarka leh ma aha oo keliya, laakiin sidoo kale ilmaheeda. Wakhtigan waa mid aad muhiim u ah in aan la cunin cunto badan, balse yar, laakiin aad waxtar u leh.
Gaar ahaan, kuwani waa ukumaha barafka, iyo sidoo kale qolkooda. Dabcan, waxba ma beddeli karaan ukunkan inta lagu jiro cilladda.
Maxay yihiin sifooyinka xun ee ukunta boodhadhka aad u baahan tahay inaad ogaatid kahor intaadan isticmaalin?
Ka ma ahan wax la yaab leh, laakiin waxaa jira wax aan caadi aheyn ee adduunkeena ku saabsan ukumaha digaagduurka. Xaqiiq ahaan, tiro badan oo xitaa daawadu waa sun, haddii aan isbarbardhigo waxtarka iyo waxyeelada ukumaha lagu sharaxay, markaa xoogga labaad ayaa loogu yeedhaa wax badan.
Daraasaadka caalamiga ah ee saameynta ukunta boodhadhku ku yeeshay jidhka bini'aadamka ayaa muujiyay inay heystaan ​​faa'iidooyinka soo socda:
Xagga sare, waxaan ku qornay in ukunta digaaga duurjoogta ah ay ka caawiso in ay la dagaallamaan content-ka xad-dhaafka ah ee jirka ee jirka, laakiin aqoonyahanno badan ayaa ku doodaya ka soo horjeeda. Xaqiiqdu waxay tahay in sheygani uu sidoo kale ka kooban yahay kolestarool, inkasta oo sifooyinkiisa ay aad uga duwan tahay waxa jidhkeennu ka helo ukumaha digaaga.
Sidaa darteed, haddii aad qabtid kolestaroolka iyo sidoo kale waa heer sare - waxa fiican inaadan halis gelin, iyo inaad ka tagto badeecadan. Xaqiiqdu waxay tahay in haddii walaxdani ay ku ururto qadar aad u weyn, ka dibna waxaa suurta gal ah in la xiro marinnada dhiigga iyo sameynta xinjirowga dhiigga.
Sidaa darteed, ukumahaas laguma talinayo xitaa dadka qaba xanuunka atherosclerosis.
Waxaan hore u soo sheegnay salmonella, laakiin waxaa la sheegay in kaliya la cuni karo oo kaliya cunidda ukunta digaagduurka ee gobolka khatarta ah. Laakiin, haddii ukumada karkarinta aysan dhammeystirnayn, taasi waa, waxaad cuntay cuntadii la kariyay, kadibna halistaas ayaa weli ah.
Marka xiidmaha, cudurkani wuxuu awoodaa in uu isku xiro karbohidratka iyo aalkolada, taas oo kadibna keenta soo saarista acids iyo gaasaska. Heer aad u sarreeya iyo cawaaqibyo aad u culus.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in bakteeriyadu ay ku dhici karto ukumaha oo kaliya maaha digaag xanuunsan, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo habdhismeedka qolofta ee lafaha ukunta laftiisa. Sidaa darteed, hubso in aad ilaaliso oo kaliya tallaabooyinka daaweynta kulaylka lagama maarmaanka ah, laakiin sidoo kale kaydinta badeecada la sharaxay.
Marka la eego bayaanka in ukumaha digaagduurku ay nadiifin karaan beerka, waxaa sidoo kale jira gardaro. Inkastoo guud ahaan, ukumo aan awood u lahayn in ay saameyn ku yeeshaan unugkan, laakiin sarreenkoodu waa sababta keenta qanjirada. Natiijo ahaan, ka bixitaanka xitaa xitaa wuxuu bilaabi karaa.
Intaa waxaa dheer, haddii ay jiraan dhagxaan weli ku jira gallbladder, waxaa fiican inaad ka baxdo sida soo jiidasho leh marka ugu horeysa ee ukunta digaaga digaaga.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan quudinta digaaga.
Ma runbaa in ukumaha digaagduurku dhab ahaantii cuntadu?
Cuntada waxaa loo wici karaa oo kaliya marka ay u hoggaansamaan heerka ay isticmaalaan. Haddii kale, haddii aad aad u danaynayso sheygan, cawaaqibta waa laga noqon karaa.
Ka dib marka la isku daro, qiimaha tamarta ee qandhada qeexan waa mid aad u sareysa, iyo in la cuno xitaa 10 xabbo waqti waa arrin aad u fudud qof caadi ah. Sidaa darteed, haddii ay qaadaan, cayilku muddo dheer ma qaadanayo.
Intee in le'eg ayay ukumaha digaagduurtu ku kaydsan yihiin si aanay u noqonin sunta laga helo ilo caafimaad?
Dad tiro yar ayaa dareenka ka qaata, laakiin ukunta digaaga ayaa loo kaydiyaa waqti gaaban, kaliya 5-7 maalmood.
Muddadan ka dib, waxay bilaabaan inay sii xumaadaan oo waxay keeni karaan sunta xitaa iyadoo ay ku jirto cunto karis aad u qoto dheer. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in la cuno ukumaha barafka oo kaliya cusub.
Sidoo kale, kalsoonida ukunshaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara kaydinta ukunta digaaga.
Haddii aad aragto dildilaacyo ama dentis ah markaad gadaneyso, waxaa fiican inaadan qaadin ukumahaas oo dhan. Dhamaantiis, xanaanada salmonella waxay geli kartaa ukunta xataa xitaa qolka, maadooyinka kale ee khatarta ah ee bini-aadanka ah ayaa ka heli kara iyada oo loo marayo crack.
Xitaa haddii uu jiro dildilaaca, ukunta laftiisa si tartiib ah ayuu u bilaabmaa inuu qalalo, iyo heerkulka sare ee uu cabo.
Dareen-celinta xasaasiyadeed miyuu ukumi karaa ukumiinka suurtogalka ah oo ma la siin karaa carruurta?
Sida laga soo xigtay cilmi baarayaal badan, badeecadani ma keento xasaasiyad xitaa carruurta ugu yar. Dhakhaatiirta carruurta ayaa xitaa kugula talin kara ukumiinta barafka ee carruurta. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah wax aan caadi aheyn ee badeecadani waxay noo tahay noolaha, waxay xitaa noqon kartaa xasaasiyad aad u xoog badan, gaar ahaan carruurta noolaha.
Qayb ka mid ah ukunta quailka waxaa jira hal element oo loo yaqaan ovomucoid. Waxay keeni kartaa xasaasiyad aad u culus, xittaa qof weyn.
Sababtan awgeed, waa inaadan bilaabin inaad quudiso ukumaha barafka leh cunugyada da'doodu tahay nus sano, sababtoo ah inta lagu jiro xilligan horumarka, caruurtu waxay la kulmi karaan falcelin xasaasiyadeed oo gebi ahaanba ah oo dhan marka laga reebo caanaha hooyada.
Si kastaba ha noqotee, cunuga waxaa loo bari karaa alaabtaas oo kale.
Haddii haweeney naas nuujiso, markaa marka hore waa inay bilaabaan inay wax yar cunaan. Haddii ilmuhu uusan ka jawaabin ukumaha, markaa waxaad isku dayi kartaa inaad ku quudiso ukumo aan caano badneyn, laakiin si toos ah ayaa loo siiyaa foom fiican.
Waxa kale oo aad ilmahaaga u muujin kartaa khabiiro iyo in la go'aamiyo waxyaabaha iyo walxaha uu alerjiga ku leeyahay.
Sidoo kale, waxaynu ka hadli karnaa gaarsiinta shakhsi ahaaneed ee sheyga, marka qofku uu wax ku soo boodi karo wax ka baddan, jidhkuna wuxuu si fudud u diidi doonaa. Tani ma aha wax la yaab leh waana inaanay kugu keenin walaac ku saabsan caafimaadka jidhkaaga.
Maxaa la sameeyaa: cunaa ama diidaa ukumiinka digaaga?
Go'aaminta koorsada noocaas ah waa shakhsi ahaan. Had iyo jeer waa isku day inaad tijaabiso, haddii aad ka cabsaneyso in aad sumaweysid salmonella, waxaad heli kartaa bakteeriyada khatarta ah sida caanaha iyo hilibka.
Laakiin, maaddaama aynaan rabin inaan diidno alaabadaas, ka dibna ukumaha digaaga ayaa sidoo kale noqon kara mid ka mid ah qaybaha cuntadeena maalinlaha ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la raaco xeerarka soo socda ee isticmaalka:
Si taxaddar leh u fiiri nolosha shelf ee ukunta.
Hubi daacadnimada qolofka.
U fiirso xeerarka kaydinta lagama maarmaanka ah.
Ku darso daaweynta kulaylka kahor intaadan cunin.
Sidee loo kariyaa oo u cunaa ukumaha digaagduurka?
Cuntada la kariyo waa inay ahaato mid la mid ah digaag caadiga ah. Waqtiga wax lagu karsado oo kaliya ayaa ku kala duwan, maaddaama cabbirkoodu aad u yaryahay. Ka hor inta aanad karin, ukumaha ayaa laga soo saaraa qaboojiyaha, si fiican isaga dhaqay oo lagu shubay biyo. Waxaad u baahan tahay inaad karsato ilaa diyaar, adoo ku xiran gobolka aad u baahan tahay:
Ukumaha jilicsan ee la kariyey ayaa diyaar u ah 1-2 daqiiqo bilawga biyaha karkaraya.
Ukunta ukunta adag ee la kariyey waa la kariyaa 5 daqiiqo.
Sidoo kale, hab kale oo wax lagu kariyo ayaa lagu dabooli karaa ukumaha digaagduurka - boorso. Waxay ka kooban tahay xaqiiqda ah in ukumaha la yareeyo biyo qabow, karkariyo oo isla markaaba laga saaro dabka. Si aad u digtid biyo kulul waxay u baahan yihiin inay qabsadaan nus daqiiqo kale, xitaa markaa dibadda u soo bax oo ku biyo raaci biyo qabow.
Immisa ukumo quustay ayaa la cuni karaa si aanay u waxyeeleynin jirkaaga?
Ugu horeyn, waxaad u baahan tahay inaad barato nuxurka calorie ee badeecadan, oo horay u ogaatid inta aad cuni kartid adiga oo aan waxyeello u lahayn tiradaada.
Sidaas, 100 garaam oo ukun ah ayaa ka kooban:
12 garaam oo dufan ah.
13.1 garaam oo borotiin ah.
Marka la eego xaqiiqda ah in miisaanka hal ukun oo kaliya 10-12 garaam, markaa waxaad heli kartaa qadarka tamarta adoo cunaya 10 gogo '. Laakiin, dhab ahaantii, heerka maalin kasta ee qofku ma aha mid aad u sarreeya, sidaas darteed waa ku filan in la cuno 1-2 qadar ah maalintii.
Qiyaas noocan oo kale ahi waa mid la aqbali karo xataa xitaa cuntada ugu culus cuntada, halka jirkaaga si buuxda loogu siin doono sahayda fitamiinada iyo macdanta labadaba.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ukunta ukunta 2019